မောရစ်ရှနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(မော်ရီတီးယပ်(စ်)နိုင်ငံ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မောရစ်ရှနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ မောရစ်ရှ သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အာဖရိကတိုက်၏ အရှေ့တောင်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ အနောက်တောင်ပိုင်း တွင် တည်ရှိသော ကျွန်းနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ မဒါဂတ်စကားနိုင်ငံ ၏ အရှေ့ဘက် ကီလိုမီတာ ၉၀၀ (၅၆၀မိုင်) ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ မောရစ်ရှနိုင်ငံတွင် မောရစ်ရှ ကျွန်းသာလျှင် မကဘဲ ကာဂါဒိုကျွန်း၊ ကာရာဂျိုကျွန်း၊ ရိုးဒရစ်ဂျ်ကျွန်း နှင့် အာဂါလီဂါကျွန်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။ မောရစ်ရှ ကျွန်းသည် မက်စ်ကာရင်း ကျွန်းများ၏ တစိတ်တဒေသဖြစ်ပြီး ပြင်သစ် ယေညွန်ကျွန်း (réunion) သည် အနောက်တောင်ဘက် ၂၀၀ ကီလိုမီတာ (၁၂၀မိုင်) အကွာနှင့် ရိုးဒရစ်ဂျ်ကျွန်းသည် အရှေ့မြောက်ဘက် ၅၇၀ ကီလိုမီတာ (၃၅၀မိုင်) အကွာတွင် တည်ရှိကြသည်။ မောရစ်ရှနိုင်ငံ၏ ဧရိယာမှာ ၂၀၄၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ဖြစ်ပြီး မြို့တော်မှာ လူဝီဆိပ်ကမ်းမြို့ ဖြစ်သည်။
République de Maurice (ပြင်သစ်)
ဆောင်ပုဒ်: "Stella Clavisque Maris Indici" (လက်တင်)
"အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၏ ကြယ်ပွင့်နှင့် သော့ချက်"
နိုင်ငံတော် သီချင်း: အမိမြေ
20°12′S 57°30′E﻿ / ﻿20.2°S 57.5°E﻿ / -20.2; 57.5ကိုဩဒိနိတ်: 20°12′S 57°30′E﻿ / ﻿20.2°S 57.5°E﻿ / -20.2; 57.5
မရှိ (ဒီ ဂျူရီ)
အင်္ဂလိပ် (ဒီ ဖက်တို)
ပြင်သစ် (ဒီ ဖက်တို)[Note ၁]
၂.၄% အခြား (တမီလ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ် တို့ပါဝင်)
၁.၄၅% အခြား / ဘာသာမဲ့
ပြည်ထောင်စု ပါလီမန် သမ္မတနိုင်ငံစနစ်
၁၉၆၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်
၁၉၉၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်
၂,၀၄၀ km2 (၇၉၀ sq mi) (အဆင့်: ၁၇၀)
၁,၂၆၅,၄၇၅ (အဆင့် - ၁၅၈)
• ၂၀၁၁ သန်းခေါင်စာရင်း
၆၁၈.၂၄/km2 (၁,၆၀၁.၂/sq mi) (အဆင့် - ၁၀)
$၃၁.၇၀၅ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၃၃)
$၂၅,၀၂၉ (အဆင့် - ၆၁)
$၁၄.၈၁၂ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၂၉)
$၁၁,၆၉၃ (အဆင့် - ၆၄)
အလွန်မြင့် · ၆၆
မောရစ်ရှ ရူပီး (MUR)
↑ The Constitution of Mauritius makes no mention of an official language. The Constitution only mentions that the official language of the National Assembly is English; however, any member can also address the chair in French.
↑ Language most often spoken at home, as per 2011 Census.
↑ Government Information Service – Coat of Arms။ www.govmu.org။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Statistics Mauritius. "2011 Population Census – Main Results". Government Portal of Mauritius.
↑ Mauritius - the World Factbook။
↑ Population and Vital Statistics – Year 2019။ Statistics Mauritius (March 2020)။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ World Economic Outlook Database, April 2019။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ GINI index (World Bank estimate) – Mauritius။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မောရစ်ရှနိုင်ငံ&oldid=714949" မှ ရယူရန်
၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။